Monday April 16, 2018 - 12:45:30 in Wararka by Super Admin
Taliska ciidamada shisheeyaha AMISOM ayaa markale ku celiyay in uu sii socan doono qorshaha lagu dhimayo ciidamadooda ku sugan dalka Soomaaliya.
War kasoo baxay Hoggaanka AMISOM ayaa amar lagu siiyay saraakiisha ciidamada in ay sii wadaan dhimista ciidamada Ku xigeenka howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ninka lagu magacaabo Simon Mulongo ayaa sheegay in ay dadaal ugu jiraan sidii ay ufulin lahaayeen xeerkii Golaha amaanka ee Qaramada Midoobe ee amrayay Ururka Midowga Afrika in ciidamadiisa uu kala baxo Soomaaliya inta aan lagaarin sanaddii 2020-ka.
Mulongo ayaa hadalkan ka sheegay kulan ay isugu yimideen taliye qeybeedyada AMISOM kaas oo looga hadlayay xaaladda uu marayo duullaanka lagusoo qaaday Soomaaliya.
Dowladda Federaalka ayuu ugu baaqay in ay isku tashato oo ay dhisato ciidamo awood leh oo la wareegi kara magaalooyinka ay ka bixi doonaan ciidamada shisheeye "Muhiimaddeenu waa in aan Soomaaliya gaarsiinaa marxaladda doorasho qof iyo cod ah sidaas oo ay tahay waxaan amar kusiinnay taliyaasha AMISOM in ay dedejiyaan qorshaha ka bixitaanka dalka iyagoo fulinaya xeerkii UN-ka" ayuu yiri Simon Mulongo.
Mas'uulkan katirsan Ururka Midowga Afrika ayaa intaas ku daray in 1,000 Askari oo AMISOM ah ay ka bixi doonaan Soomaaliya Bisha October ee 2018,halka ciidamo gaaray Kun askari ay sanaddii lasoo dhaafay ka saareen dalka wuxuuna carrabaabay in dhismaha ciidamadu ay si tartiib tartiib ah kusii socon doonto.
Waxa loogu yeero Q.Midoobe ayaa ka caga jiideysa sii wadidda bixinta dhaqaalaha malaayiinka dollar ah ee Bil walba lasiiyo ciidamada AMISOM, weerarada joogtada ah ee Al Shabaab ku dhiig bixinayso ciidamada shisheeyaha Jinsiyadaha kala duwan leh ayaa larumeysanyahay in ay wiiqday hadafkii laga lahaa soo duulayaasha oo ahaa in ay faafiyaan Dimuquraadiyadda ayna la dagaallamaan ku dhaqanka shareecada Islaamka.